Hevitra MPANOHARIANA | Mey 2021 |
Tsy mampino: norarÃ na tokoa ny mivarotra hanina hilaofana
2021-05-29 @ 15:44 in Ankapobeny
Efa resaka tao amin'ny tambajotra sosialy ilay na ireo taratasy fandraràna fa tsy mahazo mivarotra ireo legioma, hena, anana sns ny mpivarotra izany. Efa nivoaka mihitsy aza ireo mpikarama anjotra fa diso sy fitaka entina handrangitana vahoaka ireny taratasy ireny.
Tonga ny andro androany, nihatra tany amin'ny faritra sasany tokoa ilay fandraràna, ary misy aza ireo mpitandro ny filaminana tena nafana fo tamin'ny asa nampanaovina azy.
Ny tany Andranonahoatra Itaosy(-Unis) no nalaza indrindra sy lasa nahavoriana olona indrindra. Anarany fotsiny sisa ilay hoe fihibohana fa tsy hitako izay dikany.
Rakitra ny baiko hialàn'ny olona, efa nisy ny nanokona entana teny an-tsena no noroahina. Nisy ihany ny naneho fitarainana tamin'ireo mpitandro ny filaminana fa dia tena amin'ilay fiteny mampalahelo fa tsy mitroatra velively.
Na nisy aza ilay fahatezerana dia mampihomehy ihany ilay fihetsiky ny olona. Mba tezitra fa mampalahelo mampihomehy valaka ny zavatra ataony. Tsontsa loatra ve fa tenenina hoe miala teo dia miala tokoa. Mbola tsy tezitra matoa niala, sa izay tokoa ilay fahendrena?
Mariho tsara fa tsy nitondra ireo fitaovana toy ny ampinga na kibay mihitsy ny polisy fa ilay tsefotra mandatsa-dranomaso hita tamin'ny fahitalavitra iray iny ihany.
Misy sary iray mety tsy ho azontsika io toa hoe sary ratsy fitifitra (eo ambany) io, jereo tsara eny amin'ny hazo fa hahita paty mikirazorazo ianareo. Noho ny hafanam-pon'ny polisy be loatra io.
Tsy navoakako kosa ny sarin'ireo hanina niparitaka tamin'ny arabe satria mety hifangaro amin'ny hoe fako ihany ka hanahirana ny mandika azy. Fanariana ny hasin'ny sakafo rahateo ihany koa izany.
Mariho ary fa tsy misy ahy ny sary na dia iray aza fa dia angona fotsiny no ataoko ho fampahatsiahivana. Mariho ihany koa fa nisy ireo mpanao gazety nitaraina fa noteren'ny polisy hofafana ny sary azony satria tsy azo alaina sary ny polisy manao ny asany.
Pergola: sary tsiaro sy ankehitriny
2021-05-28 @ 20:44 in Ankapobeny
Toerana iray ao Antananarivo ao ny Pergola. Naorina tamin'ny andron'ny Fanjanahantany, dia nampiana tsangambaton-dRabobalahy taty aoriana.
Dia nisy ny fandokona nataon'ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ho laoranjy avy eo. Fa lokombato io tamin'ny voalohany tany?
[nampiana] Teny midina noho ny fahatezerana?
2021-05-27 @ 22:14 in Ankapobeny
Nisy filoham-pirenena taloha izany nandalo ny tsenan'Ambohidahy dia misy ny mihevitra fa setrin'izany fandalovana izany ity taratasy iray ity.
Fa lasa aiza ny sonia?
Loharano hafa indray ity manaraka ity
Fa inona moa izany no ivoaha miantsena raha mikatona ireo?
Taratasy filazana vidin-davanila sy Karapokontany misy dokambarotra
2021-05-19 @ 21:38 in Ankapobeny
Misy ny manoratra fa mandroso mihemotra ny mpitondra. Natahotra tamin'ny fihetsiky ny olona tamin'ny nivoahan'ny hanaovana ny vidin-davanila.
Ny minisitra tompon'andraikitra roa tonta ihany no nanao ny sonian'ireo taratasy roa ireo.
Etsy ankilany indray, nisy dokambarotra ny kara-pokontany navoakan'ity pejy iray ity.
Eritrereto hoe ny kara-panondronao na ny pasipaoronao no nasiana dokambarotra tahaka izao.
Dia mba fanampiny sy ankamantatra ho anareo koa hoe iza daholo moa ny orinasa nametraka ny dokambarotra?
Izay fa tsy asiantsika resaka lavabe.